मलेसियाले सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई लिन अस्विकार गरेको हो ? यस्तो छ् वास्तविकता ! - ramechhapkhabar.com
मलेसियाले सुरक्षा गार्डमा नेपालीलाई लिन अस्विकार गरेको हो ? यस्तो छ् वास्तविकता !
२१ मंसिर,क्वालालम्पुर ।
मलेसियामा हाल नेपालीलाई मात्र सुरक्षा गार्डको रुपमा लिने गरिएको छ । यसअगाडी पनि मलेसियाले तालिम समेत राम्रो नदिई श्रमिक पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । सन्देश प्रबाहा बाट